Uphengululo lweefaquet zasekhitshini laseDelta, isikhokelo sokuthenga kwiiFompo zekhitshi laseDelta, iifompo zasekhitshini
Ikhaya / Blog / Uphengululo lweefaquet zasekhitshini laseDelta: Isikhokelo sokuthenga ngo-2021 seefayili zeDelta zasekhitshini
2021 / 02 / 03 uhleloBlog Isikhokelo se-Faucet 12924 0
Ikhitshi lakho lingaphezulu kwendawo yokuphosa kunye isidlo sangokuhlwa. Yindawo yokuhlanganisana ekhayeni lakho, kwaye kwiintsapho ezininzi, ingumthombo wobushushu kunye novuyo. Impompo efanelekileyo yasekhitshini iya kugqibezela ukujonga okufunayo ngelixa usenza umsebenzi wakho wokupheka nokucoca lula.
Ukuyifumana ifanelekile ekhitshini lakho, jonga ezi zinto ziphononongwa ngefayile ye-Delta yeefompu zethu esizithandayo.
1. U-Essa Tsala itompu yasekhitshini
Ifayiphu efanelekileyo yasekhitshini ifuna zonke iimpawu ozifunayo ngaphandle kokuvuthela uhlahlo-lwabiwo mali. Ukulungelelanisa phakathi kwexabiso kunye neempawu ezisebenzisekayo, i U-Essa Tsala itompu yasekhitshini I-9113-AR-DST amanqaku aphezulu kwindawo yethu kuluhlu lweefompo zasekhitshini.
Ipropati yedayimani yevali
IMagnaTite Docking yokutsala ezantsi ithumbu
Ukutshiza kunye nokuhambisa imisebenzi
InnoFlex PEX imigca yokubonelela ngokudibeneyo ibandakanyiwe
I-Delta Essa itsalela itepu yasekhitshini ine-design elula eneempawu ezichanekileyo, kodwa iklasikhi ehambelana kakuhle nakweyiphi na ikhitshi. Umbhobho omncinci une-plain, curve ethambileyo nesiphatho esinye sokusebenza, ngelixa ithumbu lokutsala likunika lonke uguquko oludingayo.
Enye into oyithandayo phakathi kwabanini bamakhaya yimingxunya yokucoca yokuCoca. Awusayi kuphinda usebenzise iibrashi zamazinyo okanye iincopho zamazinyo ukuzama ukucoca imingxunya kwimpompo yakho, ngakumbi ukuba amanzi akho ashiya ngasemva kweetyuwa.
2. Leland Tsala ezantsi Faucet
Ungathini ukuba uyayithanda imisebenzi yompompo we-Essa kodwa ufuna ukuba itepu yakho ibe yinto enesitayile ngakumbi? Inkqubo ye- I-Leland Tsala i-Faucet ye-9178-AR-DST lukhetho olufanelekileyo.
Ukutshiza, ukusasaza, kunye nemisebenzi yeShieldSpray
ILeland inikezela ngeempawu ezifanayo ne-Essa kodwa ngokongezwa kweShieldSpray Technology. Oku kuyilwa kwe-Delta entsha kukunika umlambo onamandla ngelixa unciphisa ukubhobhoza. Khawufane ucinge xa ​​uhlamba izitya ngaphandle kokucoca i-overspray emva koko.
Ngelixa i-Leland esemgangathweni iza nazo zonke ezi zinto zibalaseleyo, unokhetho lwetephu yelizwe kunye nezinye iindlela eziphambili. Zama imodeli ngeTouch2Ulawulo lokuchukumisa okanye utyalomali kwimodeli ephezulu kakhulu ngeLizwiIQ, ekuvumela ukuba ulawule itepu kunye nabancedisi bakho belizwi abanjengo Alexa okanye uGoogle.
3. I-Trinsic single-Handle Faucet
Kulungiselelwe abo bakhetha ukujongwa okwangoku kumbhobho wabo, i I-Trinsic single-Handle Faucet 9159-AR-DST lukhetho olukhulu. Inawo onke amanqaku kunye nokuthembeka kwayo nayiphi na itephu ye-Delta enesitayile esihle.
Iimpawu kunye nesitayile ziyafana phakathi kweTrinsic kunye ne-Essa. Nangona kunjalo, iTrinsic inexabiso eliphezulu. Ezinye izinto ezigqityiweyo zixabiso kunabanye, nangona ukhetho olufanelekileyo lunokumisela amashumi eminyaka.
Njengazo zonke iimodeli ezikolu luhlu, iTrinsic isebenzisa itekhnoloji ye-Innoflex PEX ye-Delta ukunciphisa umngcipheko wokuvuza kwimpompo yakho. Idityaniswe ne-Delta's Diamond Seal valve, yenza itephu ehlala ixesha elide ekhusela ikhitshi lakho ekuvuzeni nakumonakalo wamanzi.
4. I-Lenta-Handle Faucet
Njengoko uthenga iipompo, isitayile iya kuba yinto yokuqala yokutsala iliso lakho. Inkqubo ye- I-Lenta ibamba enye yokuPhatha ibhobho 19802Z-CZ-DST uqinisekile ukubamba ingqalelo yakho ngesiseko sayo esikhethekileyo, kodwa ayikhuphi kumgangatho kwinkqubo.
I-Lenta inazo zonke izinto zeklasikhi ozilindeleyo kwi-Delta Faucet: i-valve ekumgangatho ophezulu wokuthengisa, i-InnoFlex PEX yokuhambisa imigca, kunye neMagnaTite Docking. Itekhnoloji yeShieldSpray eyaziwayo kunye nethumbu eliguquguqukayo liyenza isebenziseke ngokwaneleyo ukuphatha malunga nawo nawuphi na umsebenzi.
Umahluko omnye wokuqwalaselwa kukuba ngokungafaniyo nezinye iimpompo ezikolu luhlu, i-Lenta ayiniki ukhetho lokubandakanya i-VoiceIQ.
5. I-Essa-Handle single-Bar-Prep Faetet
The Essa: the Delta faucet so nice they made it twice. Oku I-Essa Yokuphatha Ibha yodwa yokuPhatha iBart 9913-AR-DST Iyafana nemodeli ye-Essa esiyibeke kwindawo yokuqala kuluhlu lwethu, kodwa ngexabiso elisezantsi kancinci.
Iimodeli ezimbini ze-Essa ziyafana kodwa ngumahluko ophambili: le incinci. I-Essa Pull-Down Faucet's spout ifikelela ngaphezulu kweesentimitha ezilithoba ukusuka kwisiseko, ngelixa ukufikelela kwale modeli kungaphantsi kweesentimitha ezisixhenxe. Le modeli incinci ikwi-14.5 ye-intshi ubude xa kuthelekiswa ne-15.75-intshi Essa Pull-Down Faucet.
Zombini ezobukhulu zinobubi kunye nobubi babo. Ibhobho enkulu iya kukunika indawo yokuntywila yokucoca izinto ezinkulu. Kwangelo xesha, ayizizo zonke iikhitshi ezinendawo yompompo omkhulu kuba kukho iikhabhathi, iishelfu, okanye ezinye izinto ezifakwe ngaphezulu kwesinki. Konke malunga nokulinganisa indawo yakho nokwazi ukuba unokuhlala ntoni.
6. I-Addison ye-Handle Kitchen Sink Faucet
Ukuba ufuna ukubukeka okungafaniyo kunye nokujika kwikhampasi yakho yasekhitshini, uya kuyithanda uyilo lwe I-Addison i-Hand-single Handle Faucet Faucet 9192-AR-DST. Ewe kunjalo, zininzi izinto ezisebenzayo ukuthanda nazo.
Akukho mntu unokumangalela u-Addison ngokuba ubuqili. Cinga ngale faucet njengendawo yokuhombisa yasekhaya eyenzekayo ekunikezeleni ngeempawu ezintle zompompo. I-Addison ayisiyiyo kuphela uyilo lwesitayile kodwa ngumbhobho omde ngokukodwa.
Ngaphezulu komgangatho othembekileyo weDelta Faucet, iAddison ibandakanya iShieldSpray Technology ukukunika amandla okutshiza anamandla nge-splatter encinci. Isiphelo esaziwayo se-10.34-intshi ukufikelela kunye nokuphakama kwayo kukunika amandla okuhamba ngeembiza ezinkulu kunye nezinye izinto ezinzima esinkini.
Ukukhetha i-Faucet Faxet Faucet
Zonke iipompo zasekhitshini ezingentla zinazo izinto ezilungileyo nezingalunganga. Xa isiza kuwo, nangona kunjalo, nayiphi na kuzo inokongeza ikhitshi lakho kwisitayile kunye nokusebenza.
tagIFaucets yasekhitshini	Ngaphambili :: Uphengululo lweMibhobho yaManzi yegumbi lokuhlambela i-Delta: Isikhokelo sokuthenga ngo-2021 kwii-Delta zeBhafu yokuhlamba next: Uphengululo lweMibhobho yeDelta yokuHlola: Isikhokelo sokuthenga se-2021 seDelta Shower Faucets
2021 / 04 / 12 1197
Igumbi lokuhlambela elinye lanele, kutheni ufuna amagumbi okuhlambela amabini e-China?
2021 / 04 / 12 1082
Igumbi lokuhlambela endlwini, khetha ukuba ungene kwigumbi langasese lodonga? Okanye uMsele wamanzi eTai ...
2021 / 04 / 12 1015
2021 / 04 / 11 1273
2021 / 04 / 11 1039
2021 / 04 / 10 887